Dadka wax ka barta gudaha Saldhigyada Ankara | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraBaarayaashu kama shaqeeyaan Ankara Metro Stations
Baarayaashu kama shaqeeyaan Ankara Metro Stations
15 / 10 / 2019 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, Metro, TURKEY
jaranjarada ku socota saldhigyada metrooga ee ankara
Dowlada Hoose ee Magaalada Ankara ayaa dhawaan sameysay bayaan qoraal ah oo ku saabsan kuwa ka soo cararaya ee aan ka shaqeyn xarumaha Saldhigga.
Bayaan ay soo saartay Dawladda Hoose ee Magaalada, ALO 153 Shaxda Buluugga ah, gaar ahaan kororka cabashooyinka ka yimid baraha bulshada ee ku saabsan aargoosiga ayaa la sharraxay sababta uusan wixiyuhu u shaqeynaynin.
XADGUDUBKA KA HOR
Ankara Metro, ANKARAY iyo Teleferik wadar ahaan 508 wixiyeyaasha, wiishashka, qalabka naafada ah, macluumaadka sii kordhaya ee ay ku jiraan Dawladda Hoose, silsilada gacanta iyo silsiladaha ayaa soo sheegay in khaladka kor u kaca uu sabab u yahay jab.
Waxaa la ogsoon yahay in dayactirka waxyaabaha ka badbaada wax qabadka lagu sameeyay iyada oo la adeegsanayo qalab dheeri ah oo ku jira kaydka shirkadda ama degmada oo saxeexday heshiiska dayactirka xilliyadii hore.
In kasta oo hirgelinta joogtada ahi ay tahay kiiska, heshiiski ugu dambeeyay ee dayactirka-dayactirka ahaa ee socday muddadii u dhexaysay Janaayo-Sebtember ee 2019, labadan shay waxaa loo qorsheeyay inay soo gudbiyaan Agaasinka Guud ee EGO waxaana laga saaray baaxadda heshiiska. Si kastaba ha noqotee, bixinta agabka gacanta iyo silsiladaha wax soo saarta ee dibada laga soo saaray oo qaadan kara laba ilaa seddex bilood in la keeno lama bixin karin mudadii hore. Waxa jira noocyo 6 ah oo looxyo gacmeed iyo noocyo silsilado ah oo ah 7 oo ku yaal Ankara Metro. Intaas waxaa sii dheer, dhererka jaranjarooyinka midba midka kale wuu ka duwan yahay, iyo gacanta gacanta iyo cabirka silsiladaha sidoo kale way kala duwan yihiin. Sidaa darteed, dhibaatada hadda jirta ma aha dayactir la’aan, laakiin waa dhibaatada ah bixinta agab dheeri ah sida ku xusan qandaraaskii hore loo qabtay.
SAAXIIB KU SAABSAN TILMAAMAHA CARRUURTA, XUQUUQDA AYAA LA SAMEEYA
28 si looga gudbo dhibaatada ka dib markii duqa magaalada Ankara Metropolitan Mun Mansur Yavaş uu xafiiska la wareegay, qandaraaska cusub ayaa lagu dhawaaqay bishii Agoosto. X 1 kadib qandaraaska Xilliga heshiiska cusub oo shaqeynaya ilaa Oktoobar 2019, waxaa la sheegayaa in agabyada ay tahay in ay soo gudbiso shirkadda qandaraaslaha ah.
Qalabka firaaqada ah ee la soo saaray ayaa lagu rakibay ka baxsadayaasha fashilmay tan iyo Oktoobar 5. Laga bilaabo Oktoobar wixii ka dambeeya, 2019 ayaa la rakibin doonaa sida ugu dhaqsaha badan ee suurtagalka ah ee la xiriira saamiga awoodda qandaraaslaha iyo dhibaatooyinkayaga ayaa la xallin doonaa. Waxaan ka raaligalinaynaa muwaadiniinteena caqabadihii la soo maray hawshan
Meelaha laga raaco ee Avcılar Metrobüs Station
Waddada aan haboonayn ee Salda Ski Resort
Ankara waxaa loo geyn doonaa burcad
Lambarka Ankara Mavi
ankara line lines baabuurta
BALOSB ma horumarin doonto Balıkesir kaliya laakiin sidoo kale gobolka